machinery | Vootee
February 7, 2017 by vootee
The dual-pump dual-circuit open-loop hydraulic system and the highly integrated electro-hydraulic control valve group are adopted to ensure low reversing impact and stable and reliable motions…
Posted in Business	| Tagged concrete, hbt6014, machinery, shantui, trailer | Leaveacomment |
Aspire Aim Machinery Trading Co., Ltd – AAM Trading – Baganmart
January 6, 2017 by vootee
အေအေအမ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ ရေကြောင်းသွားလာရေးသမ္ဗန်များဆိုင်ရာ၊စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာနှင့် လယ်ယာသုံးစက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်းများအား တစ်နိုင်လုံးသို့ တရားဝင် တင်သွင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted in Business	| Tagged aam, aim, aspire, machinery, trading | Leaveacomment |
Jinlong Myanmar Machinery Trading – ကျင်းလုံမြန်မာ
January 5, 2017 by vootee
Jinlong Myanmar Machinery Trading မှထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကို ကြာရှည်ခိုင်မြဲစေရန်တွက် အရေအသွေးကို ဂရုစိုက်ပီး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် စက်များကို အကြီးအသေး အမျိုးအစားအလိုက် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Posted in Business	| Tagged က, jinlong, machinery, Myanmar, trading | Leaveacomment |
Myanmar Agricultural Machinery – SHIFENG ထွန်စက်
January 2, 2017 by vootee
ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီသည် ထွန်စက်နှင့်နောက်တွဲ များကို ရောင်းချ ဖြန့် ချီ လျက်ရှိပါသည်။ ရှေ့ ဘက်ကမြေထိုးစက်၊ လိုအပ်သောစက်ကိုတပ်ဆင်ပြီး၎င်းနောက်ဘက်ကမြေကော်စက်၊ ( ၄ )ဝိုင်းထယ်စက်၊ လိုအပ်သောစက်ကို၎င်းတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ မြေပြင်မှ ကောင်းစွာ ကင်းလွတ်သည့်အတွက် သွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။ ဆီစားလည်းသက်သာသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ကွင်းထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရန် သင့်တော်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မူနည်းပါးစေသည်။ထွန်စက်မောင်းသူအား တစ်နေ့ လုံး တောက်လျှောက် အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းစက် ကိုဝယ်ယူလိုပါက ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
Posted in Business	| Tagged agricultural, ထ, machinery, Myanmar, shifeng | Leaveacomment |
SATAKE Co.,Ltd – Rice Mill Machinery in Myanmar
December 22, 2016 by vootee
SATAKE producesacomprehensive range of individual machines, Color sorters, Rice Mill Machinery, Rice Mill Plant, Rice Polisher, Rice Whitener and lab equipment for the processing of rice, wheat and other grains.
Posted in Business	| Tagged machinery, mill, Myanmar, rice, satake | Leaveacomment |
BaganTrade – 2017 Agricultural Machinery Expo – Pathein, Myanmar
November 29, 2016 by vootee
BaganTrade is Myanmar Trading platform for importers and exporters. It isamarketplace that engages made in myanmar products to global markets. Most myanmar suppliers are handicrafts and agriculture products suppliers. Through partnership with local government authorities, BaganTrade.com will hold “2017 agricultural machinery expo” for3days in Pathein, City of Ayeyarwady Division (Delta Region)
Posted in Business	| Tagged 2017, agricultural, bagantrade, expo, machinery | Leaveacomment |
Myanmar Agricultural Machinery – SHIFENG ထွန်စက်များ
October 27, 2016 by vootee
ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီသည် ထွန်စက်နှင့်နောက်တွဲ များကို ရောင်းချ ဖြန့် ချီ လျက်ရှိပါသည်။မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းဖြန့် ချိသော SHIFENG ထွန်စက်များဖြစ်ပါသည်။၄ဘီးမောင်းသည်အားပိုကောင်းပြီးလယ်ထွန်ရာတွင် သုံးရန်ပိုသင့် တော်သည်။၂ဘီးမောင်းသည်လမ်းမပေါ်တွင်အမြန်မောင်းရန်သင့်တော်ပြီး ဆီစားလည်းသက်သာသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။